Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo saaka ku sii jeeda magaalada Baydhabo – idalenews.com
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo saaka ku sii jeeda magaalada Baydhabo
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa saaka la filayaa in booqasho uu ku tago magaalada Baydhaboee Gobolka Baay, kaasoo ah kii u horeeyay.
Sida ay sheegayaan wararka kulanka baarlamaanka oo saaka la filayay inuu dhaco ayaa u baaqday safarka Gudoomiyaha uu ku tagayo Baydhabo, xilli dhowaan gobolka Baay iyo degmada Baydhabo loo magacaabay Maamul KMG ah.
Wararka ayaa sheegaya in Prof. Jawaari safarkiisa la xiriiro sidii uu maamulkaas u dhiira gelin lahaa, iyadoo wali ay jirto khilaaf ka taagan maamulka uu u magacaabay gobolka Baay iyo degmada Baydhabo.
Siyaasiyiin iyo Xildhibaano ayaa dhowaan ka soo horjeestay maamulka KMG ee Gudoomiyuhu u magacaabay Gobolka Bay iyo degmada Baydhabo, kuwaasoo muddo lix bilood shaqeynaya, kadibna suura gelinaya in dadka deegaanka ay soo doortaan cidii hogaamin laheyd.
Laakiin maamulka cusub ee Gobolka Baay ayaa waxaa uu keenay culeysyo Gudoomiyaha ka soo wajahay beeshiisa, oo diidanaa in xilka laga qaado C/fataax Geesey.
Prof. Jawaari ayaa safarkiisa u horeeyay ee dibada dhowaan ku tagay dalka Itoobiya iyo Kenya, iyadoo uu noqday Mas’uulkii u horeeyay oo booqday deegaanada ismaamulka soomaalida Itoobiya, halkaasoo horumaro ballaaran uu ka jiro.
Si kastaba ha ahaatee booqashada Gudoomiyaha Baarlamaanka ee uu ku tagi doono Baydhabo ayaa noqoneysa tii u horeysay oo gudaha dalka, tan iyo markii loo doortay xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka sanadkii hore.
Dibadbax looga soo horjeedo afduubyada dadka rayidka ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo
Wasiiru dowladaha Arrimaha gudaha oo dhiira-geliyay Diblomaasiyiinta Soomaalida ee tababarka uga socda Koofur Afrika